चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवको रूपमा क. सी चिनफिङको पहिलो मन्तव्य
(चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवको रूपमा क. सी चिनफिङले पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)
सञ्चार माध्यमका साथीहरुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औं राष्ट्रिय महाधिवेसनको व्यापक सम्प्रेषण गरी चीनमा व्यक्त भएका अनेकौं भावनाहरुलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुभएको छ । महाधिवेसन सचिवालयको तर्फबाट म तपाईंहरुलाई हाम्रो हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
हामीले भर्खरै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औं केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्ण बैठक सम्पन्न गरेका छौं तथा नयाँ केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गरेका छौं । म केन्द्रीय समितिको महासचिवमा चुनिएको छु । नवनिर्वाचित नेतृत्वका सदस्यहरुको तर्फबाट पार्टीका अन्य सबै सदस्यहरुलाई हामीप्रति उहाँहरुको विश्वासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । विश्वासयोग्य बन्न एवं हाम्रो कार्यभार पूरा गर्न हामी दिलोज्यानले कार्यरत रहनेछौं ।
पार्टीका सदस्यहरुबाट प्राप्त विश्वास एवं चीनका सबै जातिका जनताहरुका महान् आकाङ्क्षाहरु दुवैबाट हामी प्रगाढ रुपमा उत्साहित भएका छौं र यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा पनि हामीले गहन रुपमा बुझेका छौं ।
हामीले राष्ट्रका लागि यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका छौं । हाम्रो राष्ट्र विशाल छ । ५००० वर्षको विकासक्रममा चिनियाँ राष्ट्रले मानव सभ्यताको प्रगतिमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको छ । आधुनिक समयको प्रादुर्भावपछि हाम्रो राष्ट्रले बयान गरिनसकिने दुखकष्टहरुबाट गुज्रनुका साथै ठूला सङ्कटहरुको सामना गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रको पुनरुत्थानका लागि उच्च आर्दशहरु पछ्याउँदै असङ्ख्य जनताहरु उठेका छन् तर तिनीहरुले प्रत्येक पटक असफलता खेप्नुपर्‍यो । सन् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि यसले चिनियाँ जनताको अगुवाइ गर्दै ठूला बलिदानहरुका साथ सम्पूर्ण व्यवधानहरुका विरुद्ध अगाडि बढेको छ, साथै गरिब र पिछडिएको चीनलाई एक दिनानुदिन प्रगतिशील एवं सशक्त राष्ट्रको हैसियतमा रुपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय पुनरुत्थानका लागि पूर्ण रुपमा एक नयाँ क्षितिज उजागर गरेको छ ।
समग्र पार्टी एवं चीनका सम्पूर्ण जाति जनताहरुलाई साथ लिएर तिनीहरुको अगुवाइ गर्नु, चिनियाँ राष्ट्रको पुनरुत्थानको लक्ष्य अगाडि बढाउनु र त्यसका लागि लगातार लागिरहनु हाम्रो दायित्व हो जसबाट चीन एक सशक्त राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुन सकोस् र मानव जातिलाई एक नयाँ एवं बृहत् योगदान गर्न सकोस् ।
यस महत्त्वपूर्ण दायित्व भन्नु नै जनताप्रतिको जिम्मेवारी हो । हाम्रा जनता महान् छन् । चिनियाँ जनताले बहादुरी र बुद्धिमतापूर्ण तवरले परिश्रम गरेको लामो इतिहास छ, जसबाट एक सुन्दर राष्ट्र सिर्जित भएको छ र यहाँ सबै जातिका जनताहरु मेलमिलापको स्थितिमा रहेका छन् र एउटा विशाल र गतिशील संस्कृतिको विकास भएको छ । हाम्रा जनताका जीवनप्रति प्रगाढ स्नेह छ । उनीहरु अझ राम्रो शिक्षा, अझ स्थिर रुपको रोजगारी, अरु बढी आम्दानी, भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा, अझ राम्रो औषधोपचार र स्वास्थ्यको हेरचाह, उन्नत बसोबासको व्यवस्था र सुन्दर वातावरणको आकाङ्क्षा राख्दछन् । उनीहरु आफ्ना बालबच्चाका लागि स्वास्थ्य वृद्धि, राम्रो व्यवसाय र अझ बढी आनन्दमय जीवनको आशा राख्दछन् । जनताको सुखमय जीवनप्रतिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न हाम्रो लक्ष्य हो । सुखी जीवन कडा मिहिनेतबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । सम्पूर्ण पार्टी र सबै जातिका जनताहरुलाई आबद्ध गरी उनीहरुको सङ्कुचित विचारलाई मुक्त पार्दै सुधार र खुलापनलाई सञ्चालन गर्दै उत्पादन शक्तिहरुलाई झन् बढी बन्धनमुक्त र विकसित गर्दै जनताका कार्य एवं जीवनका समस्याहरु हल गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ साझा उन्नतिमा लागिपर्नु हाम्रो उत्तरदायित्व हो ।
यस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भन्नु नै पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी हो । हाम्रो पार्टी दिलोज्यानले जनताको सेवा गर्ने राजनीतिक पार्टी हो । पार्टीले जनताको नेतृत्व गरी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ, जसप्रति हामी प्रत्येक दृष्टिबाट गौरव अनुभव गर्न सक्छौं । तर हामी कहिले पनि धेरै आत्मसन्तुष्ट भई विगतका उपलब्धिमै रमाइरहने छैनौ । नयाँ परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले धेरै गम्भीर हाँकहरु एवं पेचिला विषयहरु पार्टीभित्र भोग्नेपरेको छ, विशेषतः भ्रष्टाचार जनस्तरबाट टाढिँदै जाने अवस्था, औपचारिकता र कर्मचारीतन्त्रका विधिमा मात्र सन्तुष्ट रहने केही पार्टी पदाधिकारीमा रहेका यस्ता प्रवृतिको सम्बोधन गर्नुपर्न आवश्यकता छ ।
यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि हामीले हरेक प्रयासहरु गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण पार्टी पूर्ण सतर्कतामा रहनुपर्दछ । “असल वस्तु बनाउन फलाम पनि असल चाहिन्छ ।” हाम्रो उत्तरदायित्व के हो भने सबै पार्टी सदस्यहरुको सहभागितामा यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्दछ र पार्टीले आफ्नो व्यवहारको आफैं सुपरिवेक्षण गर्नुपर्दछ । दरिलो अनुशासनमा परिचालन गरी पार्टीभित्रका प्रमुख समस्याहरु प्रभावकारी रुपले समाधान गर्नुपर्दछ । आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्दछ र जनतासँग निकट सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा हाम्रो पार्टी चिनियाँ विशेषताहरुसहितको समाजवादलाई अगाडि बढाउने नेतृत्वको केन्द्रमा अवश्य नै कायम रहने छ ।
जनता इतिहासका सिर्जनाकार हुन् । उनीहरु नै सच्चा नायक हुन् र हाम्रो शक्तिका स्रोत हुन् । हामी के कुरामा पूर्ण रुपले सजग छौं भने कुनै व्यक्तिको क्षमता सीमित हुन्छ तर जब हामी एउटा किल्ला स्वरुप आबद्ध हुन्छौं, हामीले समाधान गर्न नसक्ने समस्या नै हुँदैन । एक व्यक्ति सीमित समयको अवधिका लागि मात्र सक्षम रहन सक्छ तर सम्पूर्ण भावका साथ जनताको सेवा गर्नुको कुनै सीमा हुँदैन । हाम्रो दायित्व पहाडहरु भन्दा पनि गह्रौं छन् । हाम्रा कार्यहरु कठिन छन् र अगाडिका मार्गहरु लामा छन् । हामीले सदा नै जनताहरु के सोच्दछन् भन्ने कुरा मनमा लिनुपर्दछ र तिनीहरुको सुख र दुःखमा सहभागी बन्नुपर्दछ । जनताका भलाइका लागि एवं इतिहास र जनताको अपेक्षा अनुरुप उनीहरुको साथ लागेर परिश्रमपूर्वक कार्य गनुपर्दछ ।
चीनले बाँकी विश्वका बारेमा अझ बढी जानकारी प्राप्त गर्नु आवश्यक छ र बाह्य विश्वले पनि चीनबारे अझ बढी जान्नु आवश्यक छ । सञ्चार क्षेत्रका हाम्रा साथीहरु चीन र बाँकी विश्वका बिच आपसी समभदारी बढाउन लागि क्रियाशील रहनेछन् भन्ने कुरामा म आशा राख्दछु ।
(चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ औँ केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोको स्यायी समितिका सदस्यहरुको नोभेम्बर १५, २०१२मा गरिएको पत्रकार सम्मेलनको वक्तव्यको सम्पादित अंश – सम्पादक)
Previous - हामी मार्क्सवादकै निर्देशन र पथप्रर्दशनमा अगाडि बढेका छौँ
Next - बदलिँदो परिवेश: महिलाको अवस्था